Abantwana Ukunikezelwa kwamandla
Ukuba umntwana ngokuqhelekileyo wakhula kwaye wakhulela, ukutya okuqhelekileyo kuyadingeka. Ukungabi nesidlo kwabantwana abasandul 'ukuzalwa kubazali abaninzi banesibindi. Akukho mfuneko yokuthatha ngokukhawuleza amanyathelo amancinci ukuba umntwana unesidlo esibi, ekholelwa ukuba oku kubangelwa sisifo. Makhe sithethe ngamanyathelo alula aya kunceda ekwenzeni ukutya okunomsoco kumntwana.
Kutheni i-appetite isinciphisa?
Abantwana banoma yiphina ubudala: ukususela kwiintsana ukuya kwintsholongwane banokuphelelwa ngumdla. Yaye yonke imihla ifihla izizathu zayo zokunciphisa okanye ukungafuni ukutya.
Ukungondleki kakhulu ngonyaka wokuqala wobomi babantwana, izizathu eziphambili
Ngokuqhelekileyo abantwana abasandul 'ukuzalwa, ukuba balambile, badla kuphela, kwaye banesidlo esihle. Emva kwakho konke, ukukhula komzimba komntwana omncinci kudinga izondlo ezingaphezulu kunabantwana asebekhulile, ngoko-ke abantwana abaneminyaka emibini abanqabile ukuba bayidle. Kodwa ukuba umntwana osanda kuzalwa usetyenziselwa ibele ixesha elifutshane okanye wenqaba yonke into evela kubisi lonina, ngoko kukho izizathu zokucinga ukuba kunokubangela.
Ukutya okungahambiyo kwiintsana - zibangelwa ntoni kwaye zenzeni?
Esinye sezizathu eziqhelekileyo zesondlo esifanelekileyo kwiintsana kuyimpawu yesakhiwo somlenze wesisu (umzekelo, intshontsho okanye isicu esisisigxina). Ifomu engafanelekanga yesikhumba ingavumeli ukondla umntwana. Umntwana uya kulamba aze abonise ngazo zonke iindlela: ukukhathazeka rhoqo, ukukhala, ukubetha imilomo, ngamanye amaxesha umlomo okhukhulayo. Umama uya kufuneka afumane indlela yokuphuma kwimeko: nokuba ubonise ubisi kwaye uyondle ebhotile, okanye ukondla ngendlela efanele, kungekhona ukulungelelanisa, ukuhlala, ukuze umntwana athole ukutya, kwaye ukutya kufanelwe.
Esinye isizathu sokungahambi kwesidlo kwiintsana ezisanda kuzalwa sisiphumo se-runny, ukuxinwa kwendoda kumntwana. Ekubeni umntwana ephefumula ngeempumlo xa ancelisa isifuba sesisu, kubalulekile ukuba i-airways ayifakiwe. Ngaphandle koko, inkqubo yokutya ayinakwenzeka, ekubeni umntwana kufuneka aphefumule ngomlomo. Ukulungiswa kwesondlo kunokwenzeka emva kokuphelisa iimbangela zeqanda eliqhelekileyo.
Iintlungu zesisu somntwana esinye isizathu
I-Colic kwisisu esiswini somntwana ngenxa yokungafihleki kwe-lactose (xa umntwana engenazo i-carbohydrate yobisi). Ubuhlungu buya kwenzeka ngenxa ye-dysbiosis kwaye kuba ngexesha lokusondeza isifuba umntwana angagwinya umoya.
Kufuneka ukuba ulinde ukuphulwa okuvakalayo kumntwana emva kokusondla ngasinye, ubambelele malunga neshumi elinesihlanu ukuya kwemizuzu engamashumi amabini kwindawo efanelekileyo. Ungammisela kwesi sikhundla (okanye ubeke umntwana kwisisu sakhe emagxeni akhe) imizuzu emihlanu ukuya kweyishumi, ukuba ngokukhawuleza usana luqala ukunqanda ubisi lwebele ngokukhawuleza xa uqala ukondla.
Unokumisela ukuthanda ukutya kunye neengxube ezikhethekileyo ezingenayo iprotheni yobisi, ukuba umntwana unako ukuphefumula kwe-lactose.
Ukutya okungahambiyo kwintsana kungabangelwa ukuvuvukala kwimbumba yomlomo emlonyeni womlomo. Ikwabizwa nangokuthi i-thrush yomlomo, ebonakala ngokubonakala kwinqanaba lezilonda kunye nebala elimhlophe, kunye nokubuyiselwa okubonakalayo kwe-mucosa. Kubalulekile ukuphelisa intsholongwane ukuze kulungelelaniso isondlo.
Ukubonakala kwamazinyo okuqala
Kwaye kwaneenkqubo enjalo yemvelo ivelisa ukuvakalelwa kancinci kumntwana kwaye ichaphazela ukulahlekelwa kwesidlo. Le nkqubo isonjululwe yodwa, kwaye ukuphazamiseka kudlula ixesha. Kodwa ngeli xesha umntwana ufuna ukunakekelwa okhethekileyo kunye nengqalelo kwiqendu lakho.
Utshintsho kwisondlo somntwana osandul 'usana luya kuthinteka ngenguqu kwiimpawu zobuncu. Ngokukhawuleza, ukuba ufuna ukuzama umkhiqizo othile ongazange udliwe ixesha elide - cinga malunga nokuba kuya kutshintsha ingcamango yobisi lwakho. Umzekelo, emva kokutya igalikhi, umntwana angayenqaba ibele lakho. Ngoko ke, kufuneka uqaphele xa ugqiba ukunqanda ukutya kwakho. Kwakhona, ukungaphumeleli kungabangela ukuba izilonda zentsiba zitshatyalaliswe (i-lactational mastitis).
Xa isifuba sivutha, umama uziva ubuhlungu kunye nentlungu kwi-mammary gland, ubushushu busenokuvuka. Xa i-mastitis kunye neempawu zayo zokuqala kufuneka zidibane nodokotela ngokukhawuleza.
Ngokunciphisa kwimisebenzi ye-thyroid gland, isondlo sinokuthi okanye ayikho. Ngamanye amazwi, ukwehla komsebenzi we -roid kuthiwa yi-hypenroidism yokuzalwa. Impawu zayo eziphambili zilandelayo: ukuhlaselwa kwengqondo kunye nophuhliso lomzimba (emva koko abantwana bahlale phantsi, baqale ukubamba intloko kamva), ukunyaniseka, ukuphazanyiswa kwe-endocrine - ukulahleka kweenwele kunye nekhumba elomileyo. Ukuba ngokukhawuleza kukho ukuphuhliswa kwezi mpawu, kufuneka uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza. Ugqirha kuphela onokwenza i-diagnostic eyiyo kwaye anike unyango.
Iimeko zesondlo kwiintsana ziza kuchatshazelwa yimeko engavamile - kwindawo entsha okanye ngokukrakra. Zama ukutshintsha imeko ukuze ukhululeke ngakumbi - cima itrediyo okanye iTV okanye utyise umntwana ngaphandle kokungazi.
Isondlo esifanelekileyo sabantwana kwimpilo
Ukususela ngunyiphi inyanga umntwana angadla ukhilimu omuncu?
Umtshato wokutshata: iqela kwimibhobho yaselwandle
U-Agniya Ditkovskite wayenxiba isandi sokubamba
Iipropati eziwusizo ze-jam
Indlela yokuxhatshaza umlomo wakho?
Ukuba umntu uthi udidekile ebomini
Iibhontshisi ebusika emanzini - zokupheka kakhulu ezicocekileyo, i-beet ekhonkxiweyo, i-borsch, ukugqoka, isaladi kunye ne-caviar
I-neurosis kumntwana: yintoni oyenzayo kubazali
Ubungqingili besifazane kunye nezizathu zayo
Abafazi abanobubele kakhulu baseRussia ngo-2011
Awukwazi ukubuyisela ngexesha lokukhulelwa
Kutheni uphupha ukutshata ungathandwa
Luhlobo luni lweziqhamo olungcono kwisifo senhliziyo?